Ny effets Tech: Martech dia manao ny mifanohitra tanteraka amin'ny tanjony kendrena | Martech Zone
Ny effets Tech: Martech dia manao ny mifanohitra tanteraka amin'ny tanjony kendrena
Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Silamo Shafqat
Ao anatin'ny tontolo iray izay namboarina ny haitao ho mpanafaingana ary manome tombony stratejika, ny teknolojia marketing dia efa an-taonany maro, raha ny tena izy, manao ny mifanohitra tanteraka amin'izany.
Manoloana sehatra, fitaovana ary rindrambaiko am-polony maro isafidianana, ny tontolon'ny varotra dia mihodinkodina sy sarotra kokoa noho ny hatramin'izay, miaraka amin'ireo stacks teknika izay lasa sarotra kokoa isan'andro. Aza mijery lavitra fotsiny fa ny tatitra momba ny Magic Quadrants an'i Gartner na ny Forrester's Wave; ny habetsaky ny haitao misy amin'ny mpivarotra ankehitriny dia tsy misy farany. Matetika ny ekipa dia mandany ny fotoanany amin'ny fanaovana asa momba ny asa, ary ny vola tokony handeha hanentanana dia lany amin'ny fiasa tsy misy dikany - ary matetika amin'ny tanana.
In vao haingana fianarana, Sirkin Research dia nanadihady mpivarotra 400 isan-karazany amin'ny lahasa sy zokiolona amin'ny ezaka hahatakarana izay manakana ny martech. Nanontany tsotra ny fanadihadiana:
Mpanafika stratejika ve ny vahaolana martech misy anao ankehitriny?
mahagaga, 24% monja amin'ireo mpivarotra no nilaza hoe eny. Ireto ny valin-tenin'ny mpandinika momba ny fanadihadiana:
68% no nilaza fa tsy afaka manampy azy ireo hampifanaraka ny loharanon-karena (olona sy teti-bola) amin'ny paikady ny stack-dry zareo
53% no nilaza fa ny stack-dry zareo dia manahirana ny mandrindra marketing (fampielezan-kevitra, atiny ary famoronana) manerana ny ekipa, ny teknolojia ary ny fantsona ho fanatanterahana mahomby
48% no nilaza fa tsy tafiditra tsara ny vongan'izy ireo
Ary misy vokany ratsy tokoa:
24% ihany no milaza fa ny stack-dry zareo dia manampy amin'ny fampivondronana sy fanaovana tatitra tsara momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra
23% ihany no milaza fa ny stack-dry zareo dia afaka mitondra fiara mifampitohy amin'ny fitaovana
34% ihany no milaza fa ny stack-dry zareo dia manampy azy ireo hamorona, hitantana, hitahiry ary hizara tsara ny fananana atiny
Noho izany, maninona ny vahaolana martech amin'izao fotoana izao no tsy mahafeno ny filan'ny ekipa marketing?
Ny tena izy dia ny fitaovana martech dia efa noforonina voalohany indrindra ho toy ny vahaolana teboka - matetika mifanindran-dàlana amin'ny fironana ara-barotra farany na "fantsom-pivarotana amin'ny herinandro" - hamahana tranga iray amin'ny fanaintainana, fanamby na fampiasana tranga tokana. Ary rehefa mandeha ny fotoana, rehefa nivoatra ireo fitaovana ireo dia nanjary anaty boaty mpivarotra hamoaka RFP, manombatombana ny mpivarotra ary mividy vahaolana sokajy tokana. ohatra:
Mila mamorona sy mamoaka atiny ny ekipanay - mila sehatra marketing marketing izahay.
Eny ary, fa efa niasa tamin'ny fizotran'ny famoronana isika, andao hampiasa vola amin'ny orinasa mpitantana fananana nomerika hametrahana ny atiny hizarana sy hampiasana indray.
Mampalahelo fa amin'ny fampiharana tena izy, ireo fitaovana ireo dia miafara amin'ny fampiasam-bola mihoampampana, tsy fampiasa ary aparitaka amin'ny fitokana-monina tanteraka. Fitaovana manokana no vidiana ho an'ny ekipa manam-pahaizana. Ny vahaolana dia mipetaka amin'ny silo, tapaka amin'ny dingana lehibe kokoa. Ny rindrambaiko tsirairay dia manana ny admin, tompon-daka ary mpampiasa herinaratra miaraka aminy, miaraka amin'ny onjam-piasa tsy mitovy izay natao manokana ho an'io fitaovana io (ary io fitaovana io ihany). Ary samy manana ny antontan-taratasiny avy izy ireo.
Farany, ny zava-misy dia olana sarotra sy fahombiazan'ny asa (tsy lazaina intsony ny fitsangantsanganana matotra ao amin'ny TCO an'ny rindrambaiko CFO / CMO ao ambony). Raha afohezina: Ireo mpivarotra dia tsy mbola nahazo vahaolana afovoany izay manome hery ny ekipany hanao orkestra tena marketing.
Ny marketing amin'ny orkestra dia mitaky ny famoahana ny toe-tsaina taloha. Tapitra ny andro izay ahafahan'ny mpitarika marketing sy ny ekipa mpiasan'ny marketing mivarotra vahaolana miaraka sy mivavaka, na izany aza, ny rafitr'izy ireo rehetra dia hampifandraisina amin'ny fomba majika. Lasa ny andro fampiasam-bola amin'ny sehatra lova ho jereo ilay boaty mba tsy hananan'ny ekipan'izy ireo tanteraka sy ahazoany lanja amin'ilay fitaovana.
Fa kosa, ny ekipa dia mila mijery fomba feno momba ny varotra - tafiditra ao anatin'izany ny drafitra, ny fanatanterahana, ny fitondrana, ny fizarana ary ny fandrefesana - ary manombatombana ireo vahaolana izay manampy amin'izany farany izany. orkestra amin'ny varotra. Iza amin'ireo fitaovana no ampiasaina? Ahoana no fomba ifampiresahan'izy ireo? Izy ireo ve manampy amin'ny fanamorana sy ahafahan'ny fahitana ny vaovao, ny fanafainganana ny fizotrany, ny fifehezana ireo loharano ary ny fandrefesana ny angona?
Ny famahana ireo olana ireo dia mitaky fanovana fanovana amin'ny orkestra marketing.
Ao amin'ny fandinihana voalaza etsy ambony, 89% amin'ireo namaly no nilaza fa ho lasa mpanentana stratejika ny martech amin'ny taona 2025. Ireo teknolojia fototra voatanisa ho misy akony lehibe indrindra? Analytics mialoha ny faminaniana, fianarana AI / Machine, fanatsarana ny famoronana mavitrika ary… Orkestra marketing.
Fa Inona no atao hoe Orchestration Marketing?
Tsy toy ny fitantanana tetikasa ankapobeny, fitantanana asa, fitaovana fitantanana loharano, ary vahaolana hafa, ny sehatra famokarana marketing dia namboarina ho an'ireo fanamby manokana - sy ny fizotrany - an'ny fikambanana marketing. Ity misy ohatra iray:
Ny orkestra marketing dia fomba stratejika sy mitohy, izay miaiky ny lafiny rehetra amin'ny fizotrany mila miasa.
Amin'ny fomba mahomby, lasa rindrambaiko orkestra marketing an-trano or rafitra fikirakirana (ie loharanon'ny fahamarinana) ho an'ny ekipa marketing - toerana misy ny asa rehetra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy io dia tambatambatra mpampitohy eo anelanelan'ny teknolojia marketing, ekipa marketing ary alàlan'ny marketing - tsy manamora ny fandaminana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandrindrana ny fanentanana, ny fanatanterahana ary ny fandrefesana.
Satria ny ekipa marketing maoderina dia mitaky teknolojia marketing maoderina. Rindrambaiko izay mitondra ny tsara indrindra amin'ireto fitaovana tsy mitovy ireto amin'ny sehatra tokana (na, farafaharatsiny farafaharatsiny, mifamatotra stratejika amin'ny stack teknolojia midadasika kokoa) handrindra ny fizotrany ary koa ny famindrana atiny sy angona ho fampitomboana ny fahitana, fifehezana bebe kokoa , ary fandrefesana tsara kokoa.
Tongasoa eto Tongasoa…
Tongasoa fivarotana Orchestration Marketing dia andiana maoderina maoderina sy mitambatra ary namboarina ho fanampiana ny varotra orkestra. Manome fahitana amin'ny drafitra stratejika stratejika sy fampitoviana loharano, fitaovana hiaraha-miasa ary hivoahana haingana eo am-baravarana, ny fitantananana hitazona ny fifehezana ireo loharanom-barotra rehetra, ary koa ny fomba fijery handrefesana ny asanao.
Ary mazava ho azy, izany rehetra izany dia tohanan'ny API matanjaka sy tsena fampidirana mahery izay misy mpampifandray tsy misy kaody an-jatony - rafitra mieritreritra izay natao hanolorana fampidirana stratejika isaky ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny varotra.
Satria toy ny mpitari-dàlana mila baton iray handaminana mpitendry mozika am-polony milalao zava-maneno isan-karazany, ny maestro marketing dia mila fahitana sy fifehezana amin'ireo fitaovany rehetra hananganana marketing.
Mianara bebe kokoa momba ny fandraisana Mangataha Demo fandraisana
Shafqat Islam no mpiorina sy CEO an'ny Welcome, marika NewsCred.
Raha tsy fantatrao hoe inona ilay lohahevitra WordPress Child…
GroupSolver: Leverage AI sy NLP amin'ny fikarohana eny an-tsena